Fiara nifanenjika no nandona azy mivady, ka lasa lavitra vao tafajanona ilay fiara. Saika hitondra ilay lehilahy tany amin’ny hopitaly ilay mpamily saingy tsy tana intsony ny ainy. Nisy kaomisera nanaraka azy ireo taoriana, ary ireo sy ny sefom-pokontany no nanakana ny olona tsy hanao fitsaram-bahoaka. Nalain’ny BMH ny razana, ary efa nentin’ny mpitandro filaminana kosa ny mpamily. Mponina eny amin’ny manodidina ihany ireto mpivady namoy ny ainy noho ny loza mahatsiravina ireto. Tsy vao izao ny loza nateraky ny fandehanana mafy eny an-toerana raha ny fanazavan’ny mponina fa efa matetika.